Ifektri yaseChina Yokuhlanza Izinhlamvu, Umhlinzeki Wezinsiza Zokusanhlamvu Okusanhlamvu
Lesi sihlukanisi sokusebenza okuphezulu se-vibro, kanye nesiteshi se-aspiration noma uhlelo lokuphinda lusetshenziswe kabusha lusetshenziswa kakhulu ezigayo zofulawa nakuma-silos.
Isikrini se-Plane rotary sisetshenziselwa ukuhlanza noma ukufaka izinto zokusetshenziswa ekugayeni, kokuphakelayo, ekugayeni irayisi, embonini yamakhemikhali nasezimbonini zokukhipha uwoyela. Ngokufaka ama-sieve ahlukahlukene, ingahlanza ukungcola kukolweni, ummbila, ilayisi, imbewu kawoyela nezinye izinto eziyimbudumbudu.
Isikrini sibanzi bese ukugeleza kukhulu, ukusebenza kahle kokuhlanza kuphezulu, ukunyakaza okujikelezayo okuyisisekelo kuzinzile ngomsindo ophansi. Ifakwe isiteshi se-aspiration, sisebenza ngemvelo ehlanzekile.
I-TCXT Series Magnet tubular yokuhlanzwa okusanhlamvu, Ukususa ukungcola kwensimbi.
I-magnet kazibuthe wethu othembekile wedrowa wenziwe ngokusebenza okuphezulu komhlaba izinto ezingavamile zikazibuthe. Ngakho-ke le mishini ingumshini omkhulu wokususa i-iron wezimboni ezifana nokudla, umuthi, i-electronics, i-ceramic, ikhemikhali, njalonjalo.
Lo mshini usetshenziswa phezulu kwesilo ekususeni uthuli kanye nevolumu yomoya encane iphuzu elilodwa lokususa uthuli kusetshenziswa kakhulu ezindaweni zokugaya ufulawa, ezinqolobaneni nasemadepho okusanhlamvu ngomshini.
Imishini yokugaya ufulawa-TSYZ Series ingcindezi dampener ibamba iqhaza elibalulekile ekulawuleni umswakama kakolweni ngesikhathi senqubo yokuhlanza ukolweni ezigangeni zikafulawa.
I-Intensive Dampener iyithuluzi eliyinhloko lomthethonqubo wamanzi kakolweni ngenkathi kuhlanzwa ukolweni kufulawa wezigayo.Ingakwazi ukuzinzisa ubuningi bokuncishiswa kukakolweni, kuqinisekiswe ukuncipha kwenhlamvu kakolweni ngokulinganayo, kuthuthukise ukusebenza kokugaya, kuthuthukise ukuqina kwe-bran, kunciphise i-endosperm amandla futhi wehlise ukunamathela kwe-bran ne-endosperm okuyinzuzo ekuthuthukiseni ukusebenza kahle kokugaya kanye ne-powder sieving.Besides, kuyasiza ukuthuthukisa isivuno se-powder nekhwalithi epinki. Umshini unezinzuzo zokukhishwa okuphezulu, ukusetshenziswa kwamandla aphansi, isisindo esincane, ivolumu yokunciphisa okuphezulu, ukunciphisa okufana, okuzinzile futhi okunokwethenjelwa futhi okuphansi izinga lokuchoboza ukolweni. Enkambeni yokunciphisa ukolweni kudlala indima yokuhlanza.Kulungele ukuguqulwa kwezobuchwepheshe emgodini omkhulu, ophakathi nendawo omncane kanye nokukhethwa kwezigayo ezintsha zikafulawa.
Umshini wokwehliswa kommbila, Uhlonyiswe ngamasu amaningi asezingeni eliphakeme kakhulu, ngokuqhathanisa nomshini ofanayo ovela phesheya kwezilwandle, uchungechunge lwe-MLT lwe-degerminator lubonakala lungcono kakhulu ekuxebukeni nasekuchumeni kwenqubo.
I-aspirator yokuvuselela umoya isetshenziselwa ukuhlanza izinto eziyimbudumbudu ekugcinweni kokudla okusanhlamvu, ufulawa, okuphakelayo, ekwenziweni kwemithi, uwoyela, ukudla, ukwenziwa nezinye izimboni. I-aspirator yokuvuselela umoya ingahlukanisa ukungcola kwabantu abaphansi nezinto zokwakha eziyimbudumbudu (njengokolweni, ibhali, ipaddy, uwoyela, ummbila, njll.) Okusanhlamvu. I-aspirator yokuvuselela umoya isebenzisa ifomu lomjikelezo ovaliwe, ngakho-ke umshini ngokwawo unomsebenzi wokususa uthuli. Lokhu kungonga eminye imishini yokususa uthuli. Futhi ngenxa yokuthi awushintshi umoya nomhlaba wangaphandle, ngakho-ke, ungagwema ukulahleka kokushisa, futhi ungangcolisi imvelo.
I-scourer enezingqimba ngokuvamile isebenza ngokubambisana nesiteshi se-aspiration noma isiteshi sokuphinda usebenzise kabusha endaweni yaso. Bangakwazi ukususa kahle izinhlayiya zegobolondo ezihlukanisiwe noma ukungcola okungaphezulu okusanhlamvu.